CIRRACHA KALEE (RENAL STONES) -Dr. Dhinsaa Yoonaas-FAYYAAN QABEENYA!! – Beekan Guluma Erena
CIRRACHA KALEE (RENAL STONES) -Dr. Dhinsaa Yoonaas-FAYYAAN QABEENYA!!	Beekan Erena
HEALTH May 19, 2016May 19, 2016OROMO
65SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
CIRRACHA KALEE (RENAL STONES)
Cirrachi kalee kan inni uumamuu danda’u:’
1. Hanqina bishaan qaama keessaatiin;
a. Namoota bishaan ga’aatti hin dhugne yookiis hin arganne keessatti carraan uumamuu isaatii nii dabala.
i. Namoota bakka gammoojjii (hoo’ina qabu) jiraatan,
ii. Namoota jiruun /hojiin/ isaanii bakka ho’a qabu keessa ta’e.
2. Kan umuriin isaanii waggaa 20-40 ta’e.
3. Furdina qaamaa garmalee qabaachuu.
4. Dhibee kalee irratti uumamu kan “infection” jedhamu, baakteeriyaadhaan dhufu.
Mallattoon isaa maali?
Dhibeen kun mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda’a; garuu yeroo kalee keessa sosocho’uu eegaluu fi gara ujummoo “Yuureeter” jedhamu, kan kalee fi afuuffee fincaanii wal-quunnamsiisutti darbu, mallattoon armaan gadii nii mul’ata.
1. Dhukkubbii cinaacha gar-tokkee/gar-lamee.
2. Dhiiga fincaanii wajjin mul’atu.
3. Dhukkuubbii gara garaa gadi aanuu fi gara mudaammuddii fi sarbaa gara oliiti dhukkubu .
4. Dhukkubbii cimaa dhufee badu (colicky pain).
5. Haqqee, fincaan dafee dafee dhufuu fi kkf
1. Bishaan guyyaatti bay’inaan dhuguun filatamaadha. (kunis ga’eessi tokko guyyaatti fincaan hamma liitirii 2.5-3 tti fincaa’uu danda’uu qaba!). Bishaan dhuguun dabalataan cirrachi xixiqqoo ta’an akka fincaan waliin ba’an godha.
2. Dhugaatii lallaafaa (soft drinks) baay’inaan fudhachuu dhiisuu
3. Nyaata pirootiinii baay’inaan qabuu (fkn. foon diimaa) fi ashaboo nyaataa hir’isuu.
4. Cuunfaa loomii dhuguun dhibee kana ittisuun nii danada’ama.
Dr. Dhinsaa Yoonaas
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa65SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← The Nation under genocide and the need for a unity leadership to combat it: The Oromo case January, 2016-By Leenjiso Horo
FANGASII MIILLAA (TINEA PEDIS or ATHLETS’S FOOT) -Dr. Dhinsaa Yoonaas -FAYYAAN QABEENYA!! →